I-PartnerStack: Phatha abaxhumana nabo, ama-Resellers, kanye nozakwethu | Martech Zone
I-PartnerStack: Phatha abaxhumana nabo, ama-Resellers, kanye nozakwethu
NgoLwesine, Septhemba 24, 2020 NgoLwesithathu, Januwari 13, 2021 Douglas Karr
Umhlaba wethu udijithali futhi obuningi balobo budlelwano nokuzibandakanya kwenzeka ku-inthanethi kunanini ngaphambili. Ngisho nezinkampani zendabuko zihambisa ukuthengisa kwazo, insiza yazo kanye nokuzibandakanya kwazo ku-inthanethi… kuyinto ejwayelekile lena entsha kusukela ubhadane kanye nokukhiya.
Ukumaketha ngezwi ngomlomo kuyisici esibucayi kuwo wonke amabhizinisi. Ngokomqondo wendabuko, lokho kudluliselwa kungasebenza ... ukudlulisa inombolo yocingo noma ikheli le-imeyili likazakwabo futhi ulinde ukuthi ucingo lukhale. Emhlabeni wedijithali, ubudlelwano nabalingani bakho bungaphathwa, bulandelelwe, futhi busetshenziswe online ngokusebenza kahle okukhulu.
Kuyini Ukuphathwa Kobudlelwano Kozakwethu (PRM)?
Ukuphathwa kobudlelwano bomlingani uhlelo lwezindlela, amasu, izinkundla, kanye namandla asuselwa kuwebhu asiza umthengisi ukuphatha ubudlelwano babalingani. Ozakwethu bangafaka abanye abathengisi, abathengisi abakhuphukayo nabasezansi, abathengisi ababambisene nabathengisa kabusha.
Izinhlelo zozakwethu ziguqula ama-ejensi, abathengisi abathengisayo, kanye nabathengisi asebevele bathengisela amakhasimende akho afanele isandiso seqembu lakho lokuthengisa. Yingakho izinkampani ze-SaaS ezikhula ngokushesha zisebenzisa ubambiswano ukushayela ukutholwa, ukugcinwa, kanye nemali engenayo, ngaphezu kwalokho okungenzeka kukodwa.
I-PartnerStack iyipulatifomu yokuphathwa kobudlelwano nabalingani kanye nemakethe. IPartnerStack yenza okungaphezu kokuphatha ubudlelwano bakho - yakha iziteshi ezintsha zemali ngokunika wonke umuntu ophathina wakhe impumelelo.
IPartnerStack ukuphela kwayo ipulatifomu yokuphathwa kozakwethu yakhelwe ukusheshisa imali engenayo evela ezinkampanini zombili futhi ozakwethu abasebenza nabo - ngoba impumelelo yabalingani bakho ingeyakho. Izici nezinzuzo kufaka:
Kala iziteshi eziningi - Noma ngabe ufuna ukuvala amadili amaningi, khiqiza ukuhola okuningi noma ulethe ithrafikhi emkhankasweni wakho olandelayo, i-PartnerStack yakhelwe ukuphatha lonke uhlobo lobambiswano - futhi zonke ngasikhathi sinye.
Landelela izixhumanisi zozakwethu, ukuhola, namadili ngaphakathi kwe-PartnerStack
Shumeka izinhlelo zokwethembeka kwamakhasimende ngqo kumkhiqizo wakho
Thengisa ngqo ngamanethiwekhi abasabalalisi nge-PartnerStack API
Khulisa ukusebenza kozakwethu - Izinhlelo ezibeka phambili ukuzibandakanya zikhiqiza imali eningi. I-PartnerStack ikusiza ukuthi wakhe imizwa yangokwezifiso kusiteshi ngasinye sozakwenu, ukhulisa ozakwethu abasha kubadlali abaphezulu.
Dala amaqembu ophathina ngezakhiwo zemiklomelo ezihlukile nokuqukethwe
Shintsha ukugibela kozakwethu ngamafomu wangokwezifiso nokugeleza kwe-imeyili
Singatha izimpahla zokumaketha ozakwethu ngaphakathi kwamadeshibhodi kazakwenu
Shintsha izinkokhelo zozakwenu - Esinye sezizathu ezivame kakhulu izinkampani ukuhambisa uhlelo lwazo ku-PartnerStack: bakhathele ukuchitha isikhathi ukwenza isiqiniseko sokuthi abalingani bayakhokhelwa njalo ngenyanga. I-PartnerStack ikukhokhela ozakwethu.
Thola i-invoyisi eyodwa yanyanga zonke, ekhokhwa ngekhadi lesikweletu noma nge-ACH
Ozakwethu bahoxisa imivuzo yabo ngeStripe noma ngePayPal
Thobela imithetho yomhlaba futhi unikeze amaqembu ezezimali ukubonakala
Sisebenzisa i-PartnerStack ukunika amandla ukuhanjiswa kwamakhasimende, abaxhumana nabo, kanye nabathengisi kabusha. Yisixazululo esisodwa sokumiswa kokugibela kozakwethu, ukwenza kusebenze, ukukhokhelwa nazo zonke izidingo zethu zomlawuli; ukuvuselelwa okuvuselelayo kubuso bezobuchwepheshe bozakwethu obukhona.
UTy Lingley, Umqondisi Wobambiswano Ongavumelekile
IPartnerStack inemakethe esebenzayo enamakhulu ezinkampani ezisebenzisa isoftware yazo, enika amandla ozakwethu (njengami) ukusesha nokukhomba amathuba wokuqhakambisa amathuluzi amakhulu. Banesoftware kuma-vertical amaningi - kufaka phakathi iHuman Resources, ukuthengisa, ukumaketha, ukubalwa kwezimali, ukuthuthukiswa, ukukhiqiza, imithombo yezokuxhumana, nokuningi.
Bhuka i-PartnerStack Demo Namuhla
Ukudalulwa: Singabanxusa be- I-PartnerStack!
Tags: ipulatifomu yokuphathwa kokuhambisanakokujoyinaipulatifomu yokubambisanaukuphathwa kozakwethuipulatifomu yokuphathwa kozakwethuukuphathwa kobudlelwano bomlinganiumlinganiprmukuphathwa kokudluliselwaukuphathwa kwabalingani bokudluliselwaipulatifomu yokudluliselaipulatifomu yokuphatha abathengisiipulatifomu yokuthengisa kabushasaasyini prm